Nhau - 2020 CBE muShanghai dumba nhamba N4-H21
Rotary Type Lip Gloss Kuzadza Muchina
Push Rudzi Mascara Kuzadza Muchina
Chipikiri Chipolish Kuzadza Uye Capping Machine
Otomatiki Chipikiri Polish Kuzadza Machine
Swirl Cream Kuzadza Muchina
Mhepo cushion yekuzadza muchina
Push Type Heating Kusanganisa Mascara Kuzadza Machine
Rotary Type Heating Kusanganisa Lip Gloss Kuzadza Machine
Imwe Bhugi inopisa Kuzadza Machine
Otomatiki Lip Bharis Kuzadza Machine
Bhora Rakaumbwa Lip Balm Kuzadza Mutsara
Semi otomatiki Lipstick Kuzadza Mutsetse
Silicone Mould Lipstick Kugadzira Line
Otomatiki Tunnel furiza
Compact Poda Kudzvanya Machine
EGCP-08A Auto Powder Kudzvanya Machine
Yakabikwa Powder Production Line
Semi Otomatiki Akasununguka Poda Kuzadza Machine
Otomatiki Akasununguka Poda Kuzadza Machine
EGPM-30L Cosmetics Powder Chisanganiso
Cosmetic Powder Pulverizer
Hydraulic Lab Zvizoro Powder Press Machine
Servo Motor Lab Yekuzora Powder Press Machine
Otomatiki Kugadzira Line
EGRL-200 Round Hombodo Kunyora Muchina
220 Flat Kunyora Muchina
EGHL-400 Horizontal Kunyora Muchina
Horizontal Pazasi Kunyora Muchina
2020 CBE muShanghai dumba nhamba N4-H21
Muna 2020, isu vanopinda CBE zvakanaka muShanghai kubva July 8 -12.
Isu tinoratidza zvigadzirwa zvedu zvikuru, senge rotary lip gloss yekuzadza muchina, kusundira mhando lip gloss mascara yekuzadza muchina, compact poda yekutsikirira muchina, yakatwasuka yekuchina muchina, cosmetic packagings yemuromo gloss, lip balm, lipstick, mascara, eyeliner uye imwe yeziso mumvuri kesi , blush compact box, yakasununguka poda zvirongo uye zvichingodaro.
Uye zvakare ivo vanobvunza mimwe mibvunzo nezve maitiro ekuzadza yakakwira viscous lip gloss mascara mushe, senzira yekudzivirira mweya bubble kana uchizadza, maitiro ekudzivirira kudonha, maitiro ekudzivirira kukomba kwekukanganisa kuita makapeti akaputswa, maitiro ekugadzirisa kuzadza vhoriyamu, kuzadza kumhanya, maitiro ekumisikidza iyo yekumhanyisa kumhanya, capping torque, maitiro ekuchenesa uye maitiro ekuona kuti yedu yemuromo gloss yekuzadza muchina kuzadza akasiyana chimiro uye saizi mabhodhoro, ingave yedu lip gloss yekuzadza muchina inogona kuitwa nekupisa uye kusanganisa. Isu tinoedzawo muchina wedu nemuromo gloss kuratidza kukwirira kuzadza kwakaringana +/- 0.03g.
Kune vatengi kuti vatenge yedu yemuromo gloss yekuzadza muchina ipapo uye zvakare sarudza akati wandei gloss machubhu ekutanga yavo nyowani dhizaini brand. Zvakare pane mutengi anoda yakashandurwa miromo gloss yekuzadza muchina neimwe shanduko yakadzama, senge kureba kwemushini mhando yekuzadza muchina kuona yakakura nzvimbo yekushanda yeanoshanda uye zvakare yakakwira yekuzadza kumhanya. Yedu yese yekuzora michina inotora yakakurumbira mhando yezvinhu kuti ive nechokwadi chekushanda kushanda, Chinja ndiSchneider, Relays ndiOmron, Servo mota iri Panasonic, PLC ndiyo Mitsubishi, Pneumatic zvinhu zviri SMC, Kubata skrini ndeye Mitsubishi, Heating controller: Autonics
Gamuchirai vatengi vatsva uye vatengi vekare kuti vashanyire webhusaiti yedu kuti muwane rumwe ruzivo rwakagadziridzwa nezve yedu michina yekuzora. Isu tinogadziridza michina yedu yezvizoro inoenderana neyedu yakajairwa muchina uye zvakare maererano nezvinodiwa nevatengi nguva dzese. Chero zano raunoda kuzadzikisa, goverana nesu zvakasununguka. Tenda isu tichava vakanaka bhizinesi shamwari uye zvakare kuve shamwari dzakanaka.
Kuchenesa mashandiro emuchina wekuzadza:
Kuti uve nechokwadi chekumisikidzwa kwemidziyo yekuchenesa uye disinfection mune yekugadzira maitiro, ipa yakajairika yekuchenesa uye disinfection oparesheni tsananguro yevanoshanda, dzivisa kusvibiswa kwemuviri nemakemikari, kuitira kudzora hutachiona hwehutachiona uye kuona mhando yechigadzirwa.
A. Ita shuwa kuti zvese zvinoshandiswa mumidziyo zvinojekeswa usati wachenesa.
B. Detergent: Deionized mvura, chena kati sipo, 75% doro.
C. Zvishandiso zvekuchenesa: bhurasho, pfuti yemhepo.
D. Mucheka wakachena wedonje unonyikwa mu75% doro rekushandisa.
E. Icho chigadzirwa chimwe chete, dzakasiyana batch nhamba, kuchenesa, zvikamu zvacho zvinogona kushandiswa pasina kukatanura.
F. Vashandisi vanoshanda zvinoenderana neyekuchenesa mashandiro uye vanoona kuti nhanho yega yekushanda inosangana nezvinodiwa.
G. Munhu anoona nezve kugadzirwa achaona kuti vashanduri vanokwanisa uye mahunyanzvi vanoshanda zvinoenderana neanoshanda mashandiro, kutarisira uye kuongorora mamiriro ekuchenesa, uye rekodhi nekusaina panguva yakakodzera.
Usati wachenesa, zvikamu zvese zvinoda kubviswa zvachose nemhando dzakasiyana uye nhamba yevara.
A. Kuzadza kwapera, zvigadzirwa zvinoguma zvabviswa muhopper uye zvinofanirwa kucheneswa.
B. Midziyo yacheneswa, asi inofanira kucheneswa zvakare kana isina munhu kwevhiki.
C. Kana zvakanyatsotsanangurwa nevatengi uye zvigadzirwa, kuchenesa kunoitwa zvinoenderana nezvakakosha magwaro evatengi uye zvigadzirwa.
Post nguva: Jan-06-2021
5F Bldg 1 Mayisha Sci-Tech Innovation Park 88 Xutang Mugwagwa Songjiang Dunhu 201613 Shanghai China